Fikrado Archives · Page 2 of 4 · Jowhar.com Somali News Leader
Category Archives: Fikrado
Xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan Gacanka Carbeed iyo xidhiidh u jaridda Qatar waxay muujinaysa hardanka siyaasadeed ee quwaddaha saddexda ah ee ku loolamaya Gobolka, kuwaas oo kala ah: ...
Mucaarad siyaasadeed waa marka koox mideysan ay ka soo horjeedaan siyaasada dowlad markaa jirta, waxay doonayaan in ay saxaan ama abuuraan is bedel, iyagoo u maraya in ay diidaan, ka codeeyaan, dhaleeceyaan ama falanqeeyaan siyaasada iyo go’aamada dowlada. ...
Qormadaydan kooban ee su’aalaha bixinaysa ayaan jeclaystay in aad ila wadaagtaan taasoo igu dhalisay qudbooyinka qiirada Lahaay ee Uu Ra’iisulwasare Kheyre uu munasabadaha xamar ka jeediyo Markasto ...
Magaalada Jowhar ayaa ah magaalo fac weyn isla markaana magaalo madax u ah Gobolka baaxada weyn ee Shabeelaha Dhexe oo dhaqashada xoolaha iyo beeraha ku caan ah Ma Jowharadaa Mise waa Joog oo Har. ...
Qurbe: Gurigii Qabiilka !!! (Waxaa qoray MM Dhoore)
21 july 2012 aroor sabti Ayaan imid magaalada London ee xarunta dalkaan boqortooyada midoowde ee U.K loo soo gaabiyo. ...
Iyadoo dhowaan Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho uu amar ku bixiyay in magaca Banaadir loo bedelo Benaadir, ayaa arrintan waxay keentay doodo kala duwan oo ku saabsan sax ahaanshaha, iyadoo la isla aaday taariikh hore. Dad badan ayaa ku doodaya in magaca Benaadir la isticmaali jiray xilligii gumeystihii Talyaaniga, halka dad kalena ku doodayaan ka hor gumeystihii...
Saameeynta Musuq-maasuqa ku leeyahay Hormarka
Musuq-maasuqa waa dhicid hanti Qaran, Shaqsi ama Hanti Shirkada,hab dhicitaanka musuq-maasuqa waa mid aan toos ahayn taas oo ku dhisan khiyaano iyo hagar daamo.sidokale musuq-maasuqa waa isdaba-marinta(dhicid) hantida qaranka ama shirkad lagu aaminay qofka masuuliyada looga dhigay. ...
Dhammaan dalalka ka soo baxa ama ku sii socda dagaallada sokeeye waxay leeyihiin dabeecado u gaar ah oo ay ka mid tahay iney dhinac walba ka nugul yihiin. Nuglaantaas oo keenta iney soo wajahdo halis qarannimo oo u baahan taxaddar dheeri ah iyo faham ka yimaada xagga hoggaanka sare iyo hay’adaha curdanka ah ee dalkaas. ...
Soomaaliya waxaa ka taagan xaalad, mid ka mid ah kuwa afduunyada ugu welwelka badan, uguna qatarsan. Qaran burburay oo sal iyo baar ah, marka dhinac walba laga eegana saameeyay amniga iyo nolosha qofka, qoyska ilaa qaranka iyo qaybaha kale ee saldhigga u ah adeegyada ijtimaaciga ah. ...
February 20 (Jowhar)— Siyaasi kasta markii uu doonayo inuu qabto xil waxaa lagama maarmaan ah inuu helo koox kala shaqaysa sidii uu ku hanan lahaa xilka uu raadin, kooxdaas waxay ahaan karaan Xisbi siyaasadeed, Urur diimeed, Ganacsato, Siyaasiyiin magac leh ama Ururo Bulsho, kooxdaas waxay noqotaa kuwo kala shaqeeya ku nagaashaha kursiga ama kooxo wadata danooyin...